Ubusika 2014-2015 buyoba njani? Izibikezelo ezinembile kunazo zonke zezibikezeli sezulu
Ngokusho kocwaningo lwamuva, ebusika ka-2015 eNyakatho Yezwe Elisha isikhathi esisha sokupholisa okubukhali sizoqala. Lesi siphetho satholwa ososayensi baseJapane, ngokuhlaziya izinga lokushisa kwamanzi olwandle iminyaka engu-50. Njengoba ukuhlaziywa kukhonjisiwe, kukhona ukuhlobana okuqondile phakathi kokushisa kwamanzi ezinhlathini zasolwandle kanye nobusika. Ukutadisha ngokucophelela kwedatha kubonise ukuthi inqubo yokupholisa inomlando futhi ihlala cishe eminyakeni engama-30-35. Isikhathi sokugcina sokufudumala kwembulunga eNyakatho Hemisphere saqala ngo-1980 futhi sizophela ebusika ka-2014-2015. Ingabe lokhu kusho ukuthi silinde ubusika obanda kakhulu? Hhayi ngempela. Yebo, ebusika ka-2015 kuyoba yi-frosty, kodwa izinga lokushisa lizokwehla ngamaphesenti ama-2-3 ngaphansi kwesilinganiso uma kuqhathaniswa nezibalo ezifanayo eminyakeni edlule, ngakho ungesabi iminyaka entsha yeqhwa. Kulesi sezulu kuyoba nemimoya kanye neqhwa elincane. Imimoya yaseNyakatho nokungabi nesikhumba esikhulu seqhwa kuyothinta kakhulu isivuno sezitshalo zasebusika. Njengoba izinga lokushisa lomoya ngeke liwele phansi ngaphansi kwe-0, futhi akukho mvula eqinile, ngakho akudingeki wesabe iqhwa ebusika.
Ubusika ngo-2015 buzofika eminyakeni eyishumi yesibili kaDisemba, isimo sezulu sizoba seqhwa futhi somile-okuyisimo esiyisisekelo sokubikezela isimo sezulu. Ngemuva kwamaholide omnyaka omusha, ukufudumala okuncane kulindeleke ukuthi kuningi kweRussia yaseRussia, kodwa izinga lokushisa lomoya ngeke likhuphuke ngaphezu kwezinga. Iqhwa elinamandla lilindeleke ngasekupheleni kukaJanuwari - ekuqaleni kukaFebhuwari. Ukupholisa kuzokuhambisana nomoya ovuthayo.
Kuyoba yini ubusika 2014-2015: izimpawu zomuntu
Uma ososayensi bezibikezelo zabo baqondiswa kuphela ngemininingwane eqinisekisiwe, khona-ke okhokho bethu babekwazi ukubona izimpawu zesimo sezulu esizayo, bebukele izwe elizungezile. Phela, izilwane nezitshalo zibikezela ukuthi isimo sezulu asibi nakakhulu kunesikhungo se-Hydrometeorological Center. Isibonelo, ukuzwa indlela yokubanda kakhulu, izilwane eziningi ezithwele izinwele zigcwele ubuchopho obunzima obukhulu, obunamanzi obufudumele. Amaprotheni, amagundane nezinye izintonga ngesikhathi sasebusika esiqinile zizama ukufihla impahla yabo ngangokunokwenzeka, futhi, uma kungenzeka, sisondele eduze komuntu. Qonda ukuthi ubusika buka-2015 buyabanda uma ubheka ama-acorns. I-sheller igobolondo yabo, i-froder izoba khona. Igobolondo elikhukhulayo elikhukhulayo kuma-acorns, ama-oki avikela imbewu yabo ekufeni ebanda kakhulu. Ezinye izitshalo eziningi nazo zenza ngendlela efanayo, isibonelo, ummbila, lapho amaqabunga e-cobs eba khona ngokweqile. Izimboni ezinkulu zamapayipi zibikezela nesimo sezulu esibi sasebusika. Njengendwangu ebomvu ekwindla emithini.
Ukuhamba kule ekwindla ehlathini noma epaki, qaphela "amathiphu" alowo mvelo futhi uthole ukuthi izimpawu zabantu nokuthi yini ebusika izoba kulo nyaka.
Okungeke kunikelwe: izimpawu, izinkolelo-ze
Imvubelo inhlama ye-pizza
I-Carrot casserole: indlela yokulungiselela ukwelashwa okunempilo nokunomsoco
Kungakanani ukushada kabusha okungcono kunokuqala?
Indlela yokufundisa ingane enkulisa?
Iviki le-15 lokukhulelwa kusukela ekukhulelwe
Egg izinwele: inzuzo kanye zokupheka best for amakhambi ekhaya
Izimfihlo zokudlala ngothando
Ukukhethwa kwezibingelelo ezinhle nezifiso zomshado
Usawoti olwandle olwela ukwelashwa kwezinwele
I-Biography kafushane kaPaul McCartney
I-Horoscope ngoNovemba 2017 - I-Cancer Yamantombazane - evela kuTamara Globa no-Angela Pearl